AKW SHKWỌ AKW ONKWỌ ONB ONR ON N'ONLỌ NCHE BUSHNELL
Akuko mmepe mmepe
Ọzụzụ Ndị Ọrụ
American ụdị sooks mwekota
Britishdị Britain hose mwepu
Germany ụdị hose mwekota
Ileba anya nke oma
Ngwaahịa nke na-egbo mkpa ahụike nke ndị bi na. Dabere na WHO, ngwaahịa ndị a kwesịrị ịdị “oge niile, na oke ọnụọgụ, n'ụdị usoro ịsụ ọgwụ kwesịrị ekwesị, na ezigbo njirimara na ozi zuru oke, na ọnụahịa onye na obodo nwere ike ịkwụ”.
Thedị amị mmiri
T-bootu na mmiri mwekota
10mm American ụdị hose clmp
Ngwaahịa a na-eji eriri e ghere eghe na-eme ka skru ya jikọtara eriri nchara.
Dị mfe iji, enwere ike igbutu ya ogologo.
Enwere ike inye iwu jidere Pipe dabere na eserese ndị ahịa.
Enwere ike ịtụgharị akụkụ dị iche iche stampụ dịka ihe osise si dị.
Mgbachi a nwere bandwidị abuo nke 20mm na 32mm.Ibe niile bụ galvanized na ngwa 304 niile.
Typedị Britain hose mwekota na ịgbado ọkụ
Ala nke ụlọ maka ụdị hose mwube na Britain bụ ịgbado ọkụ.
A na-eji clamps V-band clamps mee ngwa ngwa pụrụ iche, ezigbo nkwụgide. A na-ejikarị flanges, flanges nke nha dị iche iche nwere ike iji otu uzo ahụ, ma ọ bụ leakage ga-eme, ya mere nyocha ahụ kwesịrị ịnye flange ma ọ bụ ihe osise.
A na - eji ya ejikọ ọpụpụ nke turbocharger na ọkpọkọ nke ụgbọala. Ọ nwere ike gbochie ibufere ibu na ibu ma mebie emebi na nrụgide supercharger.
Unpaal na-abụghị polar hose mwepu
Ngwa a na-ejikọtaghị ihe na-abụkarị ngwa ngwa 304, nke na-enye nguzogide corrosion ka mma, ibu dị mfe na ntinye.
Tupu akpọkọta U-udi ihe mwekota na akwa ịgbado ọkụ, iji wee mata ụzọ kacha mma, ọ ga-ebu ụzọ kaa akara idozi ebe ahụ, tinyezie kechie, ma tinye akụkụ ala nke ọkpọkọ mwepu. wee tinye na ọkpọ ahụ, gbanye ọkara nke ọzọ nke ọkpọkọ mkpuchi na mkpuchi, ma jiri skru kechie ya. Cheta ozugbo weld na ala nke ọkpọkọ mwekota.
Mpempe akwụkwọ apịaji, enwere ike ịgbadoro okporo ụzọ ahụ na ntọala, ma ọ bụ dozie ya na kposara.
Buru ụzọ wụnye akụkụ ahụ dị elu na nke obere ọkara, tinye paịlị ka ọ dịrị, tinyezie ọkara ahụ dị elu na - ejigide anụ ahụ, mezie ya na kposara, site na mkpuchi mkpọchi iji gbochie ya ịtụgharị.
The T-bolt na mmiri clamps na-agbakwunye isi iyi na T-bolt igbachi iji nabata mgbanwe nkwonkwo buru ibu, na-enye nrụgide akara akara na arụmọrụ akara pụrụ ịdabere na ya.
1234 Ọzọ >> Peeji nke 1/4